François Brunuelle: Ity mpaka sary ity dia natokana hitady an'izao tontolo izao amin'ny olona tsy misy ifandraisany | Famoronana an-tserasera
Ny angano momba ny roa na roa dia mahazatra amin'ny tantarantsika miseho amin'ny angano sy angano marobe. Raha ny marina ny teny sosias (avo roa heny), dia tena anaran'ny iray amin'ireo mpilalao amin'ny lalao Host. Hatramin'ny nahatonga an'i Mercury ho Sosias tamin'io tantara io dia nijanona ho lova io teny io ary inona ho an'ny maro no forona na tsy azo atao ho an'ny olon-kafa mihitsy, dia lasa tena zava-misy io. Indraindray dia tsy mitombina loatra ny vintana ka mampivondrona olona roa tsy fantatra sy mitovy amin'ny toerana iray na amin'ny toe-javatra iray.
Ny sasany amin'izy ireo dia nangonina tamin'ny alàlan'i François Brunuelle tamin'ny tetikasan'ity mpaka sary kanadiana ity. Ity mpanakanto ity dia nikasa ny hampivady ny fijery manerana an'izao tontolo izao ho fomba iray ahazoana mahatsapa ny fomban'ny natiora sy ny toe-javatra. Ho fanampin'izay, nilaza ny mpanakanto anay fa manana dobel fito farafahakeliny miely manerantany isika rehetra. Avy eo avelako ianao santionany amin'ny tetikasany na dia mazava ho azy aza afaka jerenao ny sanganasany feno tranokala ofisialiny. Mahagaga ny mijery ny volavolan-keviny, indrindra rehefa mahafantatra fa tsy misy amin'ireo maodeliny manana fifandraisana mivantana na fifamatorana.
Hatraiza anefa no mahazatra an'izany? Araka ny voalazan'ny biolojista Michael Sheeham, ao amin'ny karazany dia misy génétiô maro hafa tafiditra amin'ny famolavolana endrika ivelany. Raha ny marina dia misy maro kokoa ny fiovaovana tafiditra amin'ny famaritana ny endrika tarehin'ny tarehy fa tsy amin'ny faritra hafa amin'ny vatantsika. Na izany aza, na dia goavana aza io isa io, dia isa voafetra ihany izy io na dia an'arivony tapitrisa aza ny olombelona, ​​ka azo atao tsara fa misy olona mitovyManana endrika mitovy amin'izany amin'ny faritra samihafa eto amin'izao tontolo izao aho. Voafetra ny isan'ny tranga, saingy eny, be dia be kokoa noho izay inoantsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » François Brunuelle: Ity mpaka sary ity dia natokana hitady olona roa tsy misy ifandraisany manerantany